Dadka dan-yarta ah ee Xerrada Tawakal Boosaaso oo maanta loo dhagax-dhigay MCH (Dhegeyso) – Radio Daljir
Dadka dan-yarta ah ee Xerrada Tawakal Boosaaso oo maanta loo dhagax-dhigay MCH (Dhegeyso)
Agoosto 25, 2013 4:06 b 0
Boosaso, August 25, 2013 – Hay?ada MDM oo kaashanaysa ururka maxaliga ah ISDP iyo wasaarada caafimaadka ee Puntland ayaa maanta dhagax dhigtay MCH cusub, kaas oo ay yeelanayso xerrada dadka soo barakacay ee Tawakal ee Boosaaso.
Manaasabada dhagax-dhiga ee xaruunta cusub ee hooyada iyo dhalaanka ee Kaamka Tawakal ayaa waxaa goob joog ka ahaa masuuliyiin kala duwan oo ka socday Hay?adaha howsha wadda, wasaarada caafimaadka iyo maamulka gobolka.
Gaari nooca Ambulance ah ayaa sidoo kale lagu wareejiyey MCH-ka cusub, kaas oo wax weyn ka tari doona howlihii caafimaad ee ay u baahan yihiin dadka danyarta ah ee ku sugan xerrada Tawakal ee dadka barakacay, ?iyo meelaha ku dhow oo ay degan yihiin dad dan yar ah.
? Baabuurka waxaa loogu tal-galay in uu dadka u shaqeeyo oo uu soo qaado, Hooyada iyo cunuga xanuusan, xataa hadii wax looga qaban waayo howshooda MCH-ka si loogu sii gudbiyo Cisbitalka weyn? ayuu yir Maxamed Cumar oo ka socday hay?ada MDM
Dhegeyso Xuseen Madar oo daljir ka tirsan war-bixin uu ka diyaariyey furitaanka MCH-ka
Saliid sumeysan oo raad caafimaad ku yeelatay dadka deegaanada Jiriiban iyo Godob-yar (Dhegeyso)